टेलिभिजन शुल्क पनि आकाशियो, अब ५० हजार तिरिरहेका च्यानलले ७ लाख तिर्नुपर्ने ! | जनदिशा
टेलिभिजन शुल्क पनि आकाशियो, अब ५० हजार तिरिरहेका च्यानलले ७ लाख तिर्नुपर्ने !
काठमाडौँ । मुल्य अभिबृद्धि करका कारण ईन्टरनेटको शुल्क महँगिएको एक साता नबित्दै सरकारले विदेशी टेलिभिजन च्यानलको अनुमति शुल्क बढाएको छ । विदेशी च्यानलमा लिइँदै आएको शुल्क बढेका कारण टेलिभिजनका ग्राहकको मुल्य महँगो हुने भएको हो ।
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले साउन १ गते राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा रहेका केही अनुसुची हेरफेर गरेर राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरेको छ ।, आजकोअन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ नियमावलीअनुसार सरकारले टेलिभिजन डाउनलिंकका लागि यसअघि लिँदै आएको शुल्कमा बृद्धि गरेको हो ।
Previous Previous post: सगुनको आइडिया इनोभेटिभ रहेकाले गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो क्षमताअनुसार लगानी गर्नु उपयुक्त हुने
Next Next post: असोज १ मा नेपाल-चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास